Takashanyira Apple Park muCupertino, ichi ndicho chiitiko chedu | Nhau dze iPhone
Takashanyira Apple Park muCupertino, ichi ndicho chiitiko chedu
Miguel Hernandez | 01/05/2022 13:30 | Noticias
Ini ndichangobva kuSan Francisco, uye ndichishandisa mukana kuti Pisuerga inopfuura nemuValladolid, sezvavanotaura, Ndakafunga kumbomira kwekanguva muchishuwo changu chekushanya kutora mifananidzo senzvimbo dzakawanda sezvinobvira, kutsika muCupertino, iyo nzvimbo yemuzinda weApple, uye zvingave sei neimwe nzira, tarisa iyo inoshamisa mhete inonzi Apple Park.
Ndauya kuzokuudza zvakaitika kwandiri, uye ndinokuyeuchidzai kuti tichangosvika kuSpain, takanga tasvika. kutaura nekurebesa nezvazvo pane yedu yevhiki Podcast ye News iPhone.
1 Apple Park, kurota kwaSteve Jobs
2 Kutora awa detour kushanyira Apple Park
3 Zvakakodzera kushanyirwa here?
Apple Park, kurota kwaSteve Jobs
Muna Kubvumbi 2017 mabasa akapera uye vashandi vakasarudzwa vaizova chikamu chechikwata chakabatanidzwa mukati meApple Park, hombe denderedzwa imba yekuchengetera inotenderedza 260.000 square metres inosanganisira mahofisi nemarabhoritari evashandi vanopfuura zviuru gumi nezviviri. Muchokwadi, chirongwa ichi chakatangwa nemushakabvu Steve Jobs, uyo asina kukwanisa kuona rimwe remabasa ake akatanhamara rakapedzwa. Iye pachake akataura nechikwata chaNorman Foster (vagadziri veApple Park) uye akaisa hwaro hwechaizove muzinda wake, hombe uye yakamborotwa neApple muguta kwayakazvarirwa.
Zvingave sei neimwe nzira, iyo yemukati yeApple Park yaitungamira Jony Ive, rimwe remaoko ekurudyi aSteve Jobs uye kusvika nguva pfupi yadarika munhu ari kutungamira magadzirirwo akanyanya munhoroondo yeApple, kusvika apinda kumashure munguva ino nyowani inotungamirwa naTim Cook iyo iri kuunza kunyemwerera kwakawanda kune vanoisa mari.
Nzvimbo yeApple Park zvakare inopindirana nenzvimbo yenzvimbo yepamusoro yezvigadzirwa zveHewlett Packard (HP yeshamwari), yakashandurwa kuita dongo muna 2014 pakatanga chirongwa cheApple Park. Nekukwenenzverwa kweichi spaceship, Apple yaida kutenderedza makiromita matanhatu egirazi ane maonero kunze uyezve kubindu rakakura kwazvo remukati raanogara. Izvi zvinoumbwa nemiti yemichero pakukumbira kwaSteve Jobs, akakurira pedyo neminda yemaapricot, uye kunyanya nokuti Silicon Valley yakanga iri zvishoma kudarika munda wemichero isati yaputika teknolojia.
Kutora awa detour kushanyira Apple Park
Ngatitii iyo Apple Park haina kunyatso kunze kweSan Francisco, ingangoita makiromita makumi masere kubva kuUnion Square, imwe yenzvimbo dzakanyanya tsinga dzeguta hombe. Kana tikawedzera kune iyi traffic inonetesa, tinowana rwendo runosvika awa pane dzimwe nguva kuti tibve pakati peSan Francisco kuenda kuVashanyi Center yeApple Park, muCupertino. Uye apa ndipo apo munhu anongwarira akakosha maviri, ndinokurudzira kuti unyore nguva yekusangana kana wafunga, uye apa ndipo panogona kuuya kuodzwa mwoyo kwako kwekutanga.
Sezvinotarisirwa, hazvigoneke kushanyira Apple Park pachayo, Appel yakagadzira Apple Store yakasanganiswa pamberi peApple Park inosanganisa imba yekudyira, imba yekuratidzira, terasi yakatarisana neApple Park uye chitoro, zvese mune imwe. Iyo Apple Park Vashanyi Center ine yakanaka nzvimbo yekupaka yakachengeterwa vashandisi vechitoro, saka semutemo wakajairwa hauzove nematambudziko kusvikako kana kutsvaga yekupaka. Kurudziro yangu ndeyekuti iwe uuye nekukurumidza uye uwane mukana wekufamba-famba ipapo usati wagadzwa. Ndakatora mukana uyu kuyedza kutarisa muenzaniso weApple Park wavainawo padivi pechitoro ndokuenda kumateru akatarisana neApple Park, kwandakawana kuodzwa mwoyo kwechipiri.
Miti yakatenderedza Apple Park yakakura (senge zvese zviri muUnited States of America…) uye kuwedzera INRI, Apple Park pachayo iri parudzi rwechikomo. Zvese izvi pamwe chete zvinoreva kuti chivakwa chihombe hachionekwe kubva kumugwagwa wakaitenderedza, zvekuti dai pasina browser waisaziva kuti uri padyo neApple muzinda. Muchidimbu, aya ndiwo "anoodza moyo" maonero eApple Park kubva kuVashanyi Center.
Panguva ino tinodzokera kunzvimbo yechitoro yavakagonesa kwatinowana zvigadzirwa zvega kubva kune iyo Apple Store. Semutemo wakajairwa vane makagi, ngowani uye mamwe marudzi ezviyeuchidzo, zvisinei, zuva randakaenda waingowana ma-t-shirts (muhukuru hushoma nekuti vateveri vechiratidzo vakatora zvishanu neshanu), mabhegi ekutenga, uye kuwedzera zvishoma. Nhamo, nekuti ndingadai ndakafarira kuwana mukombe. Kune rimwe divi, uye sezvinotarisirwa kubva kuApple, zviyeuchidzo izvi zvine mitengo zvinoenderana nekambani, inenge 40 euros yehembe, uye inenge 25 euros yemug.
Takafunga kupedzisa kushanya sezvinodiwa nemitemo, kutenga Apple Watch Series 7, iPhone 12 Pro uye akati wandei t-shirts, handina kukwanisa kubva ndisina chipo kune mumwe wedu Luis Padilla.
Zvakakodzera kushanyirwa here?
Ichi ndicho chinhu chaunofanira kufunga nezvemunhu wega, kunyanya kana iwe uchifunga kuti maonero eApple Park akatiodza mwoyo, uye kunyangwe iyo kofi yakanaka, haisati yakafanira kufamba awa kuti uwane kofi muApple Store, uko. Nenzira, sipo yemaoko inonhuwa selollipop. Izvo izvo, Kana iwe uri fan weiyo brand kana iwe uchinyanya kunakidzwa nazvo, hazvimborwadze. Kunyanya kana tikafunga kuti iwe unogona kutenga zvimwe zvinhu (senge t-shirts, mugs, caps ... nezvimwewo) zvinotengeswa chete muchitoro ichi, rudzi rwe "Ndanga ndiri pano" uye kuti vabvise kutamba.
Ini ndaizozviita zvakare, chokwadi chaive chinhu chandanga ndaronga, saka hazvina kuchinja hurongwa hwangu hwekufamba, iwe unofanirwa kuzvisarudzira wega. Zvirinani ndinogona kutaura kuti ndaive padhuze senge munhuwo zvake anogona kusvika kumuzinda weApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Takashanyira Apple Park muCupertino, ichi ndicho chiitiko chedu